အရာစူး သုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အရာစူး သုံး
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jun 3, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 18 comments
ကျွန်ုပ်သည် အရာစူး နှစ်ခု ရေးဖူးပြီ။
ထို အရာစူး များအား ပြန်လှန် ဖတ်ရှုလိုသော မိတ်ဆွေတို့အတွက် လွယ်လင့်တကူ ပြန်ဖတ်နိုင်စေရန် လင့်ခ် များဖြင့် လမ်းညွှန်လိုက်ရပါပေ၏။
==> အရာစူး – ၁ ….. အား ဖတ်ရှုရန် နှိပ်ပါ။
==> အရာစူး – ၂ ….. အား ဖတ်ရှုရန် နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ဂန်ထရီဦးထုပ် ဖြစ်လေ၏။ ကျွန်ုပ်သည် သက်တမ်း ထောင်ကျော်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်လင့်ကစား ရုပ်ရည်အားဖြင့်မူ ငယ်ရွယ်နုပျိုနေမြဲ ရှိနေသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အဘဆရာ ရသေ့ကြီး ဦးကွပ်ထံမှ မြေလျှိုးမိုးပျံ ဂါထာအား သင်ယူ တတ်ကျွမ်းသူလည်း ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် မိုးအောက်မြေပြင် စကြဝဠာတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် သွားလာခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်ပေတော့၏။
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ် ဂန်ထရီဦးထုပ် သည် တောအုပ်ကြီးတစ်ခု၏ ကောင်းကင်ယံမှနေ၍ ဖြတ်သန်းသွားသည့် အခိုက်တွင် အဆိုပါ တောအုပ်အတွင်းမှ တလက်လက် ထနေသော အလင်းရောင်များကို မြင်တွေ့မိသဖြင့် မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်သည်ကို စူးစမ်းလိုသော အားဖြင့် ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်ကာ အလင်းရောင် ထွက်နေသည့် နေရာအနီးသို့ သက်ခဲ့လေတော့သည်။
“အလို … လူတစ်ယောက်ပါလား”
… ဟုတ်ပေ၏။ လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်ုပ် တွေ့လိုက်ရပေသည်။ သို့ရာတွင် ထိုလူသားမှ အရောင်များ ထွက်နေခြင်းကား မဟုတ်ပါပေ။ ထိုလူသားသည် ထိုတလက်လက် ထနေသော အလင်းရောင်အား ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ထိုလူသားအနီးသို့ လျောက်လှမ်းသွားလေရာ အနီးသို့ရောက်သော အခါတွင် မထင်မှတ်ပါဘဲနှင့် ထိုလူသားမှာ ကျွန်ုပ်၏ ရောင်းရင်းကြီး အဖန်တရာရီ အေအေပူး ဖြစ်နေကြောင်း သိခွင့်ရလိုက်လေတော့၏။
“ရောင်းရင်းကြီး .. ရောင်းရင်းကြီး အဖန်တရာရီ အေအေပူး”
“အို … ရောင်းရင်း ဂန်ထရီ ဦးထုပ်ပါလား၊ ဘယ်က ဘယ်လို ရောက်လာတာတုံး”
“ကျွန်ုပ် အလင်းရောင် တွေ့လို့ ရောက်လာတာပါ၊ ရောင်းရင်းကရော ဒီမှာ ဘာများ အလစ်သုတ်ဖို့ ချောင်းနေတာတုံး”
“အလို .. ရောင်းရင်း ဦးထုပ်နှယ်၊ ကျုပ်က ဘာကို အလစ်သုတ်ရမှာတုံး၊ ဟော .. ဟိုမှာ တလက်လက် ထနေတဲ့ ဂူပေါက်ဝကို မြင်ရဲ့ မဟုတ်လား”
“မြင်ပါပြီကော ရောင်းရင်း အေအေပူးနှယ်”
“မြင်ရင်လည်း ပြီးရော၊ ကျုပ်က အဲ့ဒါ ဘာလို့လဲလို့ စူးစမ်းနေတာပဲ ရောင်းရင်းရေ”
ဤသို့ ကျွန်ုပ်တို့ ရောင်းရင်းနှစ်ဦးသည် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောဆိုရင်းဖြင့် အဆုံးတွင် နှစ်ယောက်သားပင် တလက်လက် အလင်းတန်းများ ထွက်နေသော ဂူဝဆီသို့ ချဉ်းကပ်လာခဲ့လေတော့၏။
နောက်မီးလင်း အဲလေ အောက်လင်း ဒုတ်မီးဂျီးလားဟင်င်င်င်င် ???
ရာဂျာ ဘာမှ သိဝူးးနော် …
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒါ တွေးကျိဂျဘေဒေါ့ ….
ပဆုံး လာအားပေးတွားဒဲ့ ချစ်မမ ကို ချစ် ချစ် ချစ် …. <3
အရာစူးတာ ရေးတဲ့သူနော် ။
သံကြက်ဥပစ်ပြီးကစားတာတော့ ပြာထွန်းပြန့်က ဦးနေးချားပဲဖြစ်ရမယ်။
ယင်းသို့ ပြောပြီးနောက် ဘိုးတော်မှာ ထိုင်ရာမှ ထလိုက်လေ၏။ ထူးဆန်းစွာဖြင့် ၎င်းဘိုးတော် ထိုင်နေသော နေရာ၏ အောက်တည့်တည့်၌ အပေါက် တစ်ပေါက်အား တွေ့လိုက်ရလေ၏။ အဆိုပါ အပေါက် အတွင်း၌မူ ………..
ဘိုးတော် အာပီးထားသော အုံပီးသည်ကား သုံးဆယ်ကျပ်သားခန့်ရှိသည်ဟူသတတ်… ဟီ ဟိ
မမှတ်မိတော့လို့ ၁၊၂ ကိုပြန်ဖတ်ရင်း မတွေ့ရတာကြာတဲ့
သူကိုယ်သူသိုင်းသမားဒဲ့…. ခြေသလုံးပလွေရိုး သိုင်းသမား…. ခွိခွိခွိ…
ဘိုးတော် ဖင်ခုထိုင်ထားတာ….. အဲဒါ ဖုန်းဟန်းဆက်ပဲဖြစ်ရမယ်….ဖုန်းလာနေတာ မကိုင်ချင်လို. ဖင်ခုထိုင်ထားတာနေမှာ……. ဟိဟိဟိ….
ဟဲ့ အံချာဒုံး ရဲ. နီတို.နှစ်ယောက်ချောင်းကြည့်တာ ဂူပေါက်မဟုတ်ဘူး….အဲဒါ ကေတီဗွီ ရွမ်းးးး ဟိဟိဟိ
ဒီလိုသာ ရေးလိုက်၊ တစ်မေ့တမော နေပြီးမှ ပြန်ဆက်လိုက်။
ဒီလိုပုံနဲ့သာဆက်သွားလို့ ကတော့ လူပိုကြီး ဖြစ်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ။
လျူကွမ်းကျုံး ရဲ့ ဂန္ထဝင် ဝတ္ထု All men are brothers ကို မှီငြမ်းပြီး ဇာတ်ကောင်တွေ
နေရာမှာ ကျုပ်တို့ မန်းဂဇက် ဝိုင်းတော်သားတွေ ထည့် ရေးရကောင်းမလား တောင်
တမေ့တမောကြီး ပစ်မထား ရင်ရေးပါလေ။
လူပိုကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်မစိုးလို့ ပါ။
ဒါ့ထက် ကြောင်လက်သည်းကျိုးတာ ကန်စွန်းရွက်ချိုးရသလိုပဲဆိုလို့ ချိုးကြည့်ချင်မိတယ်။ :harr:
(၎င်းဘိုးတော် ထိုင်နေသော နေရာ၏ အောက်တည့်တည့်၌ အပေါက် တစ်ပေါက်အား တွေ့လိုက်ရလေ၏။)
အဆိုပါအပေါက်အတွင်း၍မူ…. ရေနွေးအိုးကျိုဖို့ မီးမွှေးထားတာ ဖြစ်မယ်။
ဟက်ကဲ့ ခည …
ဂုလို လာရောက် အားပေးဂျဒဲ့ …
ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် ကိုကို မမ အပေါင်းဒို့ကို
ကျေးဇူး အထူးပါ ခညာ …
ကျုပ်လည်း ရီပလိုင်း ပြန်မလို့ဘဲ …
ကောင်မလေးတွေက အတင်း ဆွဲထားလို့ မလာအားဘူး ဖစ်တွားဒယ် …
ဒီအတွက် အားဂျီး တောင်းဘန်ဘာဒယ်နော့ …
အပေါက်ထဲမှာ တွေ့ လိုက် ရ သည် မှာ
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု အိ အီးပုံ ဖြစ်ပေတော့ သည် တကား
အီ တွင် ဂန်နာရီ ဦးထုပ် လဲ အားရပါးရ ပြေးဆွဲလေတော့ သည်။
ဂန်နာရီ ဦးထုပ် ဖင် အောက်တွင်တွေ့လိုက်ရသည်ကား အံစာတုံး ဖြစ်နေတော့သတည်း
မှတ်ထား ကျူပ်နာမယ် အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ အံဇာ